Qaramada Midoobay oo Amar Culus kasoo saartay khilaafka ka taagan Hirshabeelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 4 January 2021
Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James swan ayaa waxa uu maanta wada-hadal khadka Internet-ka ah la yeeshay Wasiirka Arrimaha gudaha Soomaaliya Janaraal Mukhtaar Xuseen Afrax iyo Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe .
Qoraal kasoo baxay Xafiiska UNSOM ee Magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in wada-hadalkaan diiradda lagu saaray in dib u heshiin laga galo arrimaha siyaasadeed ee ka taagan Hirshabeelle.
“Waxay dhinacyadan carrabka ku adkeeyeen in muhiimadda lasiiyo dib u heshiisiinta, Maamulka iyo dowladda waxaa laga doonayaan inay bilaaban dib u heshiisiin” ayaa lagu yiri Qoraalka UNSOM.
Doorashadii ka dhacday Jowhar ee lagu doortay Madaxweynaha iyo ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa ka dhashay tabashooyin ay muujiyeen beelaha qaar, taas oo sababtay in duleedka Magaalada Beledweyne ay ka aas-aasanto jabhad hubeysan oo ka aragti ah siyaasadda maamulka.
Sacuudiga iyo Qatar oo gaaray Heshiis Culus, xili khilaaf uu ka dhexeeyay